Maaraynta Dhulka Domain Model - Xaaladda Colombia - Geofumadas
Domain Model ee Maamulka Dhulka - Case of Colombia
Maarso, 2016 cadastre, Geospatial - GIS, Maamulka Land
Maamulka Dunida, hadda, mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dalalka. Ma aha rabitaan cusub, sababtoo ah shaqadoodu waxay ka weyn tahay qodobbada muhiimka ah ee dastuurka iyo shuruucda kala duwan ee xukuma xiriirka dadka degaanka ee leh kheyraadka dadweynaha iyo khaaska ah ee qaranka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira isbeddello ah caalamiga ah ee samaynta nidaamka qaran in loo adkeeyo siyaasadda qaran oo ka faaiidaysan karaan hadda bixiya teknoolajiyada, shuruudaha adduunka iyo dabcan baahida dadka loo wanaajiyo adeegyada dadweynaha.
Laga soo bilaabo ilo wanaagsan ayaa la igu wargaliyay in Colombia ay hadda ku jirtaa nidaamka lagu dhaqmayo ISO 19152, oo loo yaqaano sida Maamulaha Guryaha Mawduuca. LADM shishadiisa isagoo applicability caadiga ah ee caalamka, waa natiijada aragtida guud ee ku takhasusay badan maareynta hantida, ka daraasadda of dheefay sida loo sameeyo dalal kala duwan in natiijo ah 1998 in lagu dhawaaqo ayaa sheegay in bedelkiisa ee nidaamyada cadastiga dhaqameed ee isticmaalka moodooyinka. Tani waa sababta ugu weyn LADM aan la iska indho tiri karin by xirfadlayaasha ku lug geosciences iyo in ay dhacdo Colombia sida la filayo, ma la arkay laftiisa in xal, laakiin marka laga eego ee oo ah fududeeyaha hirgelinta siyaasad qaran ee maamulka ee ma ahan oo kaliya xuquuqda dhulka laakiin guud ahaan alaabooyinka kala duwan ee qaranka.
Waxaan xusayaa kiiska Colombia, sababtoo ah waa inaan isha ku heynaa horumarkiisa, sida jimicsi xiiso leh taas oo shaki la'aan noqon doonta muuqaal ka baxsan xaaladda Latin America. In wajiga hore bilaabay in qeybtii labaad ee 2015 waxa uu muujiyey ma aha oo kaliya caqabad ku ah simaya hay'adaha kala duwan ee la xidhiidha maareynta hantida la taaban karo iyo carqabad ummadda; sidoo kale waxaa soo baxay hoggaanka cad iyo maturity ay ka heleen hay'adaha sida Agustín Machadka Codazzi, ka Superintendency of Notayayaasha iyo Diiwaangelinta iyo saameynta ay iskaashiga caalamiga ah oo doonaya in ay internationalize dhaqanka wanaagsan.
Geofumar in LADM muuqataa go'aanka caqli leh, siiyo caqabadaha qorshaynta guud iyo jaangooyo falalka jirkooda sida Barnaamijka aad ku rasmiyaynayso Property Miyiga Unit Land celin, Institute Colombia for Miyiga Development INCODER iyo cadastre baahsanaantey in mararka qaarkood waxaan qabaa xaalado ka fiican tan qaranka sida ka horeysa baahida loo qabo in la qabsado isbedelka.
Isbedelka caalamiga ah ee maamulka dhulka.
Waa inaan ku adkeystaa in Maamulka Dhulku uusan ahayn saynis aan aqoon u lahayn inta badan xirfadlayaasha ka shaqeeya Qaybta Qorshe-Qorista-Qorsheynta Degmooyinka; novel garan doontaa daydo UML xaqiiqada on taas Heerka LADM iyo sida loo helo in ay di'i qaab hay'adaha in mar hore ka jirta iyo in dhufto ee technology hawlgalka la soo bandhigay ka. Sidaas daraaddeed, in la dhamaystiro this article, waxaan soo badbaadiyay qiimaha ku-rogga karin in maamulka dalka ayaa soo bandhigay aqoon isweydaarsi ah oo wajiga hadda oo aan karaa si dhib Comment la'aanta on darafka cad u laakiin taasi waxay mataleysaa caqabadaha ugu waaweyn ee geedi socodka Kolombiya.
La baahinta xukunka oo ka mid ah macluumaadka habka loo cusbooneysiiyo, laga bilaabo heerarka dhexe ee dawladaha hoose, laga bilaabo aragtida mas'uuliyadda ma aha oo keliya marka la eego cadawga maaliyadeed laakiin sidoo kale sharci ahaan.
Isuduwaha nidaamyada isdhexgalka taas oo ay ka shaqeyneyso xiriirka joogtada ah ee u dhaxeeya dhinacyada danaynaya, oo ay ku jiraan dawlada ku jirta shayada matala xuquuqda danaha dadweynaha. arrin xiiso leh habkani waa in dhexe ma tilmaamayso xafiiseedyada dheeraad ah, tan iyo markii ay dhammaystirayaa arrimuhu ugu horeysay, halkaas oo ka shaqeeya xawaalad yihiin dawladaha hoose, hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaad per shaqsi; laakiin la shaqeynayo nidaamyada xawilaadda lacagaha qaranka.
Isticmaalka Diiwaanada leh taariikhda ee xogta maamulka iyo joometeriga, kuwaas oo labadaba lagu sawiray kaydinta ilaha dokumantiga iyo ku-beddelka muuqaalka. Tani waxay ka tarjumaysaa ma aha oo keliya samaynta cilmi baaris dhuleed ama qorsheeyn qorsheed, laakiin sidoo kale qaabeynaysa soo saaritaankeeda si ay u hesho codsi ku saabsan hantida dhabta ah iyo tixraacka nooca hadda.
Isticmaalka qaababka xogta loo qoondeeyey iyadoon loo eegin farsamooyinka teknoolajiyada, adoo adeegsanaya jaangooyooyin u fahmaya habka macquulka ah taas oo labadaba qaabka jireed iyo nidaamyada; iyada oo aan loo eegin haddii loo isticmaalo macaamiisha ama barnaamijyada bilaashka ah.
Naqshad ku salaysan qaabdhismeed, oo loo yaqaan Ingiriisi sida MDA (Naqshadeeynta qaabdhismeedka). Ma jirto qaab fudud, sababtoo ah degdegga ah ee shabakada bani'aadamka si ay u quudiyaan xogta iyo khatarta dhimashada waqti aan horey loo guuleysan oo caddaynaya kharashka beddelidda maskaxda.
Isdhexgalka xuquuqda dhulka, isticmaalka dhulka iyo qorshaynta dhuleed, oo loo fududeeyay xiriirka Object-Subject-Right, laakiin loo kordhiyay nidaam u oggolaanaya inuu arko xiriirka xuquuqda ka baxsan sida sharcigu si cad u qeexayo oo loo adeegsan karo hantida la taaban karo iyo mid la taaban karo.
Aragtida Cadastare ee muuqaalka aragtida wareegga noloshaIyada oo waajib ku ah in aad ka fikirto 3D ah, in inkasta oo aanay ahayn bandhigay degdeg ah oo awood si uu u dhameystiro caymiska 2D waa in la dhisay tan iyo heer maamul iyadoo la eegayo sida magaalooyinka hantida dadban iyo baahida loo qabo in diyaar u ah inay u ahaato 4D, ma aha oo kaliya a BIM-dukaanka laakiin sababtoo ah xiriirka wakhtiga ku habboon oo kaliya ayaa ku shaqeeya otomaatiga.
U hanuuninta dhinaca fududeyn iyo sahlan isticmaalka, taas oo ka dhigan in la mamnuucayo soo jeedinta Bangiga Adduunka ee soo afjaridda quraaradaha adduunka muddada gaaban iyada oo la adeegsanayo xarun dhibic ah oo ah mid deg deg ah laakiin isku dhafan oo ku xiran diiwaanka hantida, ka go'naanta saxda ah marka aan leenahay waqti -iyo lacag- Markaa waxaan ogaanay in adduunka intiisa kale uu sameeyey qaabka OpenCadastreMap.
La isdhexgalin kala duwan ee dadka ku xiran maamulka dhulka, mid kastaa wuxuu sameeya wax uu u gaar ah, nidaamkiisa, laakiin wuxuu ku soo rogayaa habka isdhaafsiga macluumaadka ee hoos yimaada heerarka isdhexgalka. Dabcan, tani waxay tusinaysaa inuusan muuqanin tiknoolaji ahaan isaga laftiisa, laakiin habka lagu gaari karo ujeedo la aqoonsaday; waxay ku lug leedahay ku daray jilayaasha si tartiib tartiib ah u tegi, iska ilaalinta ay qubaan ku takhasusay khibrad aan waafaqsanayn technology, laakiin sidoo kale kor u khayraadka dhalinyarada si ay diyaar u tahay inay la wareegaan wadada in caymiska qaadan doonta dhawr sano ka noqon.
Culeyska Colombia ee LADM
Waxaan u soo jeedin sida jimicsi dhimirka codsiga guud, siin dabagal waxa Colombia, taas oo ay u noqoto qof daacad ah kuma yeelan doonaan waxa fudud, laakiin siyaasadda iyo adkaysiga doono by the gool sare ee qaranka ammaan ogaan doonaan in ay ka faa'iidaystaan ​​fursadaha hadda isu yimaadaan -in ay jecel yihiin in ay leeyihiin waddamo kale- kuwa ka mid ah kuwa la fiiqo:
Isuduwaha xuquuqda dadweynaha sida rikoodh muujinaya hantida sawir qaadista waxayna u badashaa xuquuqda, xayiraadaha iyo masuuliyadaha labada shirkadood iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Horumarinta mashaariic tijaabo ah cadastar badan, iyada oo loo eegayo aragtida fududaynta faylka cadastiga iyada oo loo xilsaarayo masuuliyadaha cusbooneysiinta xogta.
Is-beddelka a Goobta Maamulka Dhulka gudaheeda Kaabayaasha Cunnada Colombia ICD, oo ah nooc ka baxsan bixinta juqraafiyeed ee xogta la hayo.
Dib-u-habeynta hababka lagu fududeynayo ficilada dawladaha hoose iyo ku-tiirsanaanta siyaasadaha dhexe, gaar ahaan marka la eego qiimeynta cadawga, laakiin sidoo kale furitaanka dariiqooyinka kor u qaadista, fududaynta «qabow»Of adkaanta iyo saxnaanta ay sabab u tahay horudhaca ilaalinta xogta cusboonaysiinta.
Tenacity by la dagaallamaan garbaha, ka hor intaan la saadaalin karin waddanka oo loo adeegsanayo ESRI ku dhowaadba sida muuqaalkeedu guntan yahay ee Ilaah iyo adkaanta qofka sigaar cabba ee ISO-19152 si uu u ilaaliyo arka sida habka ugu horreeya ee sharaxaadda caalamka.
Isdhexgalka Cadastar iyo Diiwaangelin nidaam keliya oo macaamil ganacsi ah, taas oo ay suurtagal tahay in aan aragno cidda kaliya ee dabiiciga ah / sharci / dadweyne laakiin sidoo kale xuquuqda la isku haysto ee ku saabsan hantida hantida, joomatari iyo canshuuraha sharciga iyo maamulka. Caqabaddan, ka baxsan isbeddel hay'adeed -taas oo aan degdeg ahayn- Waxay ka tarjumaysaa isbeddel maskaxeed ee aragtida caalamiga ah ee diiwaannada, iyada oo ah mas'uuliyad dawladeed, ka baxsan waxqabadyada degdegga ah ee mashaariicda leh rabitaan wanaagsan laakiin leh rabitaanka wada-xaajoodka siyaasadaha guud ee danaha qaranka.
Aragtida caalamiga ah ee LADM riixaya si gaar ah ee waxa Colombiiyaanka ay sameeyeen sanado badan.
Liistada rajadu waa mid aan dhammaanayn oo si wanaagsan u jirta dareenka dhabta ah, xitaa utopian. Laakiin dareenkaas oo kale ayaa ku dhacay qof kasta 14 sano ka hor markii uu lataliyuhu siiyay laba dukumiinti oo bedeli doona qaabkiisa aragtida adduunka; gaar ahaan haddii dukumiintiyadani ay ahayeen qabyo-jeedinta Cadastre 2014 ee FIG iyo soo-jeedinta Chrit Lemmen «Qodobka Cadastral Domain Model«.
Post Previous«Previous BIM - Dunida oo ku riyootay 20 sano ka hor
Post Next Download Google Earth meelaha UTMNext »